प्रचण्ड परिवारमा घट्यो अर्को दुखद घटना, शोकाकुल बन्यो खुमलटार — Sanchar Kendra
१एकाएक किन काठमाडौँ आउँदैछ भारतीय सेनाको उच्च टोली ?
२बामदेवको घरमा यस्तो अवस्थामा भेटिइन् रामकुमारी, सबै चकित
३रामकुमारी झाँक्री फेरि भाइरल, श्रीमान् बने कारण
४घाँटी का’टिएको अवस्थामा शव फेला
५नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम भोलि नेपाल आईपुग्ने
६भारतीय सेनाको ३९ सदस्यीय टोली नेपाल आउँदै
७फेरी बढ्न थाल्यो कोरोना संक्रमण, एकैदिन यति धेरै जनाको मृत्यु, देशभर तरंग
८आज पनि सर्वजनिक विदा
९एकाबिहानै मान्बु केन्द्र भएर भूकम्प
१०आज २०७८ असोज ३१ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
११आजदेखि टी-ट्वान्टी विश्वकप, उद्घाटनमा दुई खेल हुँदै
१२आज अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइदै
प्रचण्ड परिवारमा घट्यो अर्को दुखद घटना, शोकाकुल बन्यो खुमलटार
काठमाडौं, २४ चैत ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड परिवारमा पुनः अर्को दुखद घटना घटेको छ । अध्यक्ष प्रचण्डकी पत्नी सीताका भाई महाप्रसाद पौडेलको निधन भएको छ । उनी माओवादीका पार्टी सदस्य थिए ।
उनी सीताका माइला भाइ हुन् । चितवनमा बस्दै आएका पौडेलको शुक्रबार निधन भएको हो । उनको शुक्रबारै देवघाटमा अन्त्यष्टि गरिएको माअ‍ोवादी चितवनका नेता गोपाल न्यौपानेले बताए ।
प्रचण्डका भाइ नारायण दाहालले कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा ओढाएर अन्तिम श्रद्धान्जली दिएका थिए । प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालको मंसिरमा हृदयघातका कारण निधन भएपछि शोकाकुल बनेको प्रचण्ड परिवारमा पुनः शोक थपिएको छ ।
प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालको हृदयघातबाट निधन भएपछि त्यसता सीता दाहालको स्वास्थ्य अबस्था नाजुक बनेको छ । यसैमा भाइको निधन हुँदा सीतालाई पिडामाथि पिडा थपिएको छ ।
एकाएक किन काठमाडौँ आउँदैछ भारतीय सेनाको उच्च टोली ?
घाँटी का’टिएको अवस्थामा शव फेला
नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम भोलि नेपाल आईपुग्ने